Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyo cusub oo ka imanaya Florida ilaa St. Martin
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Sint Maarten Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Frontier Airlines ayaa daah -furtay 2 duulimaad oo aan joogsi lahayn oo ka yimid Florida kuna socday St. Martin bishii Luulyo 10, 2021, gaar ahaan Miami iyo Orlando.
Gaar ahaan Orlando waa albaab cusub oo cusub oo loogu talagalay St. Martin.
Jadwalkaan cusub ee duulimaadka ayaa la filayaa inuu fursado ka furo suuqyada quudinta ee Atlanta, Denver, Philadelphia, Newark, iyo Baltimore ee Maraykanka.
Florida waa gobol muhiim u ah Frontier Airlines oo dalab aad u sarreeya u muujinaya Kariibiyaanka.
Madaxweyne-ku-xigeenka koowaad ee Golaha Deegaanka St. Martin Territorial Council iyo Madaxweynaha Xafiiska Dalxiiska ee St. Martin, Ms. Valérie Damaseau ayaa goob joog ka ahayd xafladdii xarigga lagaga jaray Madaarka Caalamiga ah ee Princess Juliana, iyadoo ay weheliso Ms. De Weever, Wasiirka Dalxiiska, Arrimaha Dhaqaalaha, Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Sint Maarten.
“Waxaan ku faraxsannahay in Frontier Airlines ay ku dartay laba adeeg oo cusub jasiiraddeenna saaxiibtinimo. Daahfurka cusub ayaa naga caawin doona inaan ballaarinno joogitaankeenna gobollada muhiimka ah ee Florida, labada Miami iyo Orlando. Waxaan sii wadi doonnaa inaan si taxaddar leh u shaqeyno si aan u ilaalino St. Martin oo ah mid ka mid ah meelaha loogu doonista badan yahay Kariibiyaanka si ay u soo booqdaan, ”ayay tiri Marwo Aida Weinum, Agaasimaha Xafiiska Dalxiiska ee St. Martin. “Iyada oo loo baahan yahay safar aad u badan oo lagu tago Kariibiyaanka, waxaan u mahadcelinaynaa oo soo dhoweynaynaa booqdayaasha, malabka malabka, iyo kuwa jecel xeebta si ay u duulaan Frontier Airlines markay booqanayaan janada kulaylaha ee St. Martin.”
Frontier Airlines hadda waa lamaane qiimeeya St. Martin, taasoo u oggolaanaysa meesha loo socdo inay ballaariso wacyigelinteeda gudaha aagga Florida. Waxaa la rajaynayaa in awoodda labada Miami iyo Orlando si ay u soo jiitaan booqdayaasha caalamiga ah ee ka kala yimid daafaha dunida waxay ku dambayn doontaa in St. Martin uu qayb ka noqdo fasax laba xarumood ah oo loogu talagalay booqdayaasha doonaya inay isku daraan Florida oo leh khibrad Euro-Caribbean ah.
Duulimaadyada cusub ee Miami iyo Orlando ayaa hadda shaqeeya toddobaad walba Sabtida.